Home » Creative Writing » အာနိုးမ
အာနိုးမတို့အတွက်တော့ ပင်ပန်းလွန်းသည့် နေ့ရက်များပင် …။ နေ့ရော ညပါ အသွားအပြန် သွားနေရသည်မို့ ပွဲတော် ပြီးခါနီးရက်များတွင် ခြေကုန်လက်ပန်းကျသွားတတ်ကြသည်။
“ဒီမြင်းမ သုံးစားလို့ကို မရတော့ဘူး ..။ ခရီးသည်လေး ငါးယောက်လောက်တင်လာတာကိုပဲ ပေကပ်ကပ်နဲ့ … သေချင်ပြီထင်တယ်” မြည်တွန် တောက်တီးသံနှင့်အတူ သူမ တင်ပါးပေါ်သို့ ကြာပွတ် တရွှမ်းရွှမ်း ကျလာတော့သည်။ သခင်သွားလိုရာသို့ မရောက်မီ သူမ ရင်တစ်ခုလုံး ဆို့တက်လာကာ အသက်ရှုမဝတော့ ပြေးနေသည့် ခြေလှမ်းတို့သည် ခေါက်ကနဲ့ တုန့်သွားကာ ခြေဖြင့် မရပ်တည်နိုင်တော့သည်မို့ ဒူးထောက်လျှက်သား …….။ “ဟာ … ဒီမြင်းမတော့ကွာ …။ သေချင်နေပြီနဲ့ တူတယ်…။ ထစမ်း … ထစမ်း …..။” ကြာပွတ်ရိုက်ချက် ကြိမ်ရိုက်ချက်တို့သည် သူမ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်သို့ မရေမတွက်နိုင်အောင် ကျရောက်နေတော့သည်။ အရှေ့ တည့်တည့်သို့သာ မြင်နေရသည့် သူမမြင်ကွင်းထဲတွင် လျှပ်စစ်မီးတို့ဖြင့် ထိန်လင်းနေသည့် ရွှေသင်္ကန်းဖြင့် သပ္ပာယ်နေသည့် စေတီလေးက မှုန်ဝါးဝါး …. သူမ အမြင်အာရုံများ မရှင်လင်းတော့ …. ဝေဝါးလာသည်။ ထိုမှ အပြာရောင် …ထိုမှ လောကကြီး တစ်ခုလုံး မှောင်အတိကျသွားလေတော့သည်။
မွေးကတည်းက တုတ်တုတ်ခဲခဲ … ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ချစ်စရာကောင်းသည့် ကလေး။ ကျောပြင်တွင် အမှတ်အသားက ထင်ထင်ရှားရှားမို့ …. မိဘတွေက ချစ်စနိုးနှင့် ဖိုးမှတ်ဟု ခေါ်ကြသည်။ တစ်ဦးတည်းသော သားကလေးမို့ ကိုရင်မှိုင်း တုန်နေအောင် ချစ်လေသည်။ ခက်နေသည်ကား သားလေးက သူ့အနား မကပ်။ သူနှင့် ဝေးဝေးနေသည်။ သူခေါ်လျှင် အော်ငိုသည်။
မောင်ဖိုးမှတ်လေး အခါလည်ကျော်လာတော့ ဆော့ကစားသည့် ကစားနည်းကား သူ့လည်ပင်းတွင် သူ့အား ကျောပိုးရာ၌ အသုံးပြုသည့် ပိုးတဘက်ကို ရစ်ပတ်ကာ လေးဘက်ထောက်ပြီး ပြေးလွှားဆော့ကစားခြင်းပင် ……။
မောင်ဖိုးမှတ် စကားတီတီတာတာ ပြောတတ်သည့် အရွယ်ရောက်လာတော့ …. “တားတား နာမယ်က ဖိုးမှတ် အဟုတ်ဘူး … နာနိုးမ ….နာနိုးမ …” မပီကလာ ပီကလာဖြင့် ဟုပြောသည်။
အဲလို မြင်းတွေသေရင်.. ပေါ်စားလိုက်မှာပေါ့နော..။
ဆတ်လိုကောင်ကျ.. အရှင်လတ်လတ်.. တကောင်မှကို မမြင်ဖူးပေမယ့်.. ဆတ်သားကျ.. တော်တော်ပေါတာ..။
“ဆတ်” လား… တောထဲဝင်ရှာတောင် တွေ့မှာမဟုတ်…
မယုံရင် သားသတ်ရုံတွေရှေ့ မနက်အာရုံမတက်ခင် သွားစောင့်ကြည့်…
တလောက.. မိုင်၃၁၀၀ခရီးသွားတာမှာ.. Yellowstone N Park ထဲ.. ကားရှေ့က.. Elk တွေဖြတ်တာမို့.. ထိုင်စောင့်လိုက်ရသဗျ..။
မြင်းတွေ သေရင် ပေါ်စားကြတယ် ပြောတာပဲ . . . မြင်းသား မစားဘူးပါဘူး . . .
စွဲလမ်းခြင်းက ဘဝတဏှာကို ဖြစ်စေသတဲ့… စာအုပ်တွေထဲ ဖတ်ဖူးတာ
မျက်မြင် ကိုယ်တွေ့ကတော့ … မယုံအခက် ယုံအခက် ၅၀ – ၅၀
ကျနော်လည်း သိပ်မယုံဘူး ဦးကျောက်စ်ရ . . . ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်းပြောရရင် လောကကြီးမှာ ကိုယ်လိုက်မမီတဲ့ ကိစ္စတွေ အများသားဗျ
ဖတ်ပြီး ရင်ထဲမကောင်းဘူး . . . တိရစ္ဆာန်တွေဆို သနားတတ်နေတာ စိတ်ညစ်တယ်
ခု အသက်ထိကို လူဝင်စား ပီပီပြင်ပြင်မတွေ့ဖူးသေးဘူး